कोभिड जितेका पोलिस नागरिक भन्छन्–‘नेपालमा पनि यूरोपस्तरको स्वास्थ्य सेवा रहेछ’ – Health Post Nepal
शरीर थिलथिलो भएपछि उनको तत्काल पीसीआर चेक गरियो । कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भयो । उनीसँगै उनको टिमका ३ जनामा संक्रमण देखियो ।
उनले आफूले हचुवाको भरमा नर्भिक अस्पतालको सेवालाई यूरोपका अस्पतालले दिने सेवासँग तुलना नगरेको पनि प्रष्ट्याए ।
‘मैले यो कुनै कथा भनिरहेको छैन, यो यथार्थ हो ।’ उनले भने–‘नर्भिकको मेडिकल प्रोसेड्यूर र सेवा यूरोपकै जस्तै रहेछ । मैले यहाँ बस्दाका प्रत्येक प्रोसेड्यूरको विषयमा यूरोपस्थित मेरा निजी चिकित्सकहरुलाई जानकारी गराउने गरेको थियो, उनीहरुले पनि नर्भिकको मेडिकल प्रोसेड्यूर चेक गरे । नर्भिकका डाक्टरहरुलाई पनि यूरोपका मेरा डाक्टरहरुसँग निरन्तर सम्पर्क गराएका थिए । सो क्रममा मेरा निजी डाक्टरहरुले नै पनि ‘नर्भिकको सेवा तथा उपचार प्रक्रिया यूरोपको जस्तै रहेको’ भनेका छन् ।
One thought on “कोभिड जितेका पोलिस नागरिक भन्छन्–‘नेपालमा पनि यूरोपस्तरको स्वास्थ्य सेवा रहेछ’”
तिमिले त डलर काे खाेलाे बगाउन सकेको हुँदा युरोप मा जस्तो सेवा पाउन सफल भयौ! भनेजती पैसा धरौटी राख्न नसक्दा उपचार नपाएर अस्पताल को ढाेकामा प्राण त्याग्ने अनि उपचार गरेको रकम जुट्न नसक्दा अस्पताल ले बन्धक बनाएका नेपाली भेटेर साेधेनौ होला??